မဲရုံ မဲရုံကိုလာ့ ၊ငွေဖလားကြီးနဲ့ ၊ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခင်ခင်မင်မင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » မဲရုံ မဲရုံကိုလာ့ ၊ငွေဖလားကြီးနဲ့ ၊ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခင်ခင်မင်မင်
မဲရုံ မဲရုံကိုလာ့ ၊ငွေဖလားကြီးနဲ့ ၊ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခင်ခင်မင်မင်
Posted by padonmar on Jun 9, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette | 61 comments
ချစ်လှစွာသော ဂဇက်ချစ်သူ မန်ဘာများနဲ့ မန်မဘာများ ရှင့်
ဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုလေး ရွေးချယ်ပြီးပေးလာတာ ၉ ဆုရွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဧပြီလကတော့ ခရီးယာယီတွေ များကြလို့ ပို့စ်တွေနည်းမှာကတစ်ကြောင်း ဖတ်ရတဲ့ ဖတ်ရွေးတွေ မအားလပ်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့် မေလနဲ့ ပေါင်းပြီးမှ ရွေးမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဧပြီလ ဆုရတဲ့ မောင်ဂီရဲ့ Change ခေါင်းစဉ်နဲ့ အပြိုင် ဖတ်ရွေးတွေရဲ့ ပခုံးပေါ်က ၀န်ထုပ်ကြီးလည်း သက်သာအောင် ဆုရွေးမယ့် ပုံစံပြောင်းမယ်လို့ လည်း ပြောထားပါတယ်။
အခု ဧပြီ+မေက စလို့ မန်ဘာများက ဗုတ်ပေးရမယ့် စနစ်ကို စမ်းသပ်ပါမယ်။
ဒီလမှာ ဖတ်ရွေးတွေက အမှတ်မပေးတော့ပဲ ဖတ်ပြီးသမျှထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေ ရွေးပြီး အတွင်းရေးမှူးကြီးဆီပို့ထားပါတယ်။
ဒါကို မကြာခင် ပို့စ်အဖြစ်တင်ပါမယ်။
ဒီလ အစီအစဉ်ပြောင်းမှာ အသားမကျသေးလို့ နည်းနည်းနောက်ကျမှတင်နိုင်ပါမယ်။
ဒါကြောင့် ဗုတ်ကြဖို့ကို ဗုတ်ပို့စ် တင်တာကနေ ၁၀ရက် အချိန်ပေးပါမယ်။
စာပေဆု အကြောင်းပြပြီး ဂဇက်မိသားစု တွေ့ဆုံပွဲလေးတွေ လုပ်ရတာ သဘောကျတယ်ဆိုရင်
မဖြစ်မနေ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပို့စ်ကို ဗုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
နောင်လတွေကျရင် တစ်ခါတည်းပဲ မန်ဘာတွေက မဲပေးလို့ရရင် ပိုအဆင်ပြေပါမယ်။
(ယနေ့ပို့စ်မှာကတည်းက Category အကြမ်းခွဲပြီးမြင်နိုင်ရင် ကိုယ်ဖတ်ချင်တာ ရွေးဖတ်သွားလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်၊
၊ဒီလိုပြောရတာ မောင်အံ့ကို အားလည်းနာ သနားလည်းသနားပါတယ်။သူ့ခမျာ မညည်းမညူပဲ ယနေ့ပို့စ် တင်ပေးလာတာ ၁၁ လရှိပါပြီ၊
မဲပေးတာကိုတော့ မန်ဘာမှသာပေးလို့ရအောင်၊ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ကြိမ်သာပေးလို့ရအောင်
နန်းခင်ဇေယျာလေးကို မဲပေးသလိုတော့ အခါပေါင်းများစွာ မပေးလိုက်ကြပါနဲ့နော။
ရွာထိပ်က အိုးကြီးထဲ ရွာသားတစ်ယောက် အရက် တစ်ပုလင်းစီထည့်ကြပါဆိုတော့
ငါ့တစ်ပုလင်းရေပါတာနဲ့တော့ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူးလေ ဆိုပြီး
သောက်လိုက်တော့မှ အားလုံးရေဖြစ်နေတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ခုထဲက ရွာသားတွေလို လည်း မလုပ်ကြပါနဲ့နော်။
မဲရုံ မဲရုံကိုလာ့ ၊တစ်ရွာလုံး မဲဆန္ဒနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ခင်ခင်မင်မင် …..
မဲရုံကို မဲရုံကို လာကြလာကြ ၊
နောင်လတွေအတွက် အတူတူ စဉ်းစားကြရအောင်။
အမှန်တော့ အရင် ၉လ ဖတ်ရွေးရတာ တာဝန်လည်း ကြီးပါတယ်။
ကျမတို့ ချမှတ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ဖတ်ရုံတင်မက အမှတ်လည်းပေးရတယ်။မှတ်ချက်လည်းပေးရတယ်ဆိုတော့
ဖတ်ရွေးတွေ အတော့်ကို ခါးချည့်ကုန်ပါတယ်။
ဟို သူပုန်ဗိုလ် ကယွဲစည် ပြောသလို အမာခံ အညာခံ လူကြီးတွေပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဒီလူကြီးတွေကလည်း ကွန်ပျူတာကို အချိန်ပြည့် မသုံးနိုင်၊
ဂဇက်ကို ချစ်မိတဲ့ စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ
အအိပ်ပျက် အစားပျက်ခံပြီး အိတ်စိုက် အင်တာပရိုက်စ် လုပ်ခဲ့ကြတာ အားလုံးသိမှာပါ။
ဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုလေးလည်း ဆက်လက်တည်တန့်အောင်၊
ကဗျာပြခန်းမှသည် ကဗျာဆုလေးတွေလည်း ပေးရအောင် ၊
ဓာတ်ပုံပြပွဲ၊ကာတွန်းပြပွဲ၊ပန်းချီပြပွဲလေးတွေ လည်း တိုးတက်လာအောင်
ဆုရတဲ့ စာမူ၊ကဗျာတွေကို ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေနိုင်အောင်(ကျမလောဘကြီးလွန်းနေသလားတော့ မသိပါဘူး)
အကူအညီတွက် ကျမဖလားကြီး ဂေါက်ဂေါက်ဂေါက် ခေါက်လိုက်ပါပြီ။
ကျမရှေ့မှာ ဖလားကြီး ၃ လုံး ရှိပါတယ်။
Man, Money, Material ဆိုတဲ့ အတိုင်း
ဖတ်ရုံဖတ်ပြီး မန်ဘာ မ၀င်တဲ့သူတွေ မန်ဘာဝင်ပြီး မဲပေးပေးခြင်းဖြင့် အားပေးကြစေလိုပါတယ်။
မန်ဘာဝင်ပြီးသားလူတွေကလည်း တွေ့ဆုံပွဲတွေ လာခြင်းဖြင့် အားပေးကြစေလိုပါတယ်။
လာပါမယ်လို့ ကွန်မန့်ပေးတာလည်း ပွဲစီစဉ်ရတဲ့ သူတွေအတွက် စီစဉ်ရတာလည်းလွယ်သလို
လူများများလာမယ်လို့ သိရတာ အားဆေးတိုက်လိုက်သလို တက်ကြွလန်းဆန်းသွားစေပါတယ်။
တွေ့ဆုံဖူးပြီး ရွာသူားများကလည်း ဆုပေးပွဲ၊တွေ့ဆုံပွဲတွေ မှာ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာနေရာက ကူညီဝိုင်းဝန်းခြင်းဖြင့် အားပေးကြစေလိုပါတယ်။)
ကူညီနိုင်သူများ ရွှေတိုက်စိုး aungtike@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးကြပါ။
ဒုတိယ ဖလားကတော့ ငွေဖလားပါ။
ဇန်န၀ါရီလက လုပ်ခဲ့တဲ့ http://myanmargazette.net/164609 ဂဇက် ကွန်ဖရဲင့်စ်(၃) မှာ ရှင်းပြထားသလို
ဆုပေးဖို့နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလာတဲ့ မန်ဘာ တွေကို ဧည့်ခံဖို့ အဘဆွေနဲ့ အဘဖေါက မတည်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ ဖတ်ရွေးတွေ ၀ိုင်းထည့် ၊အဲဒီအချိန်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရတဲ့ ဦးပါက လိုတာစိုက်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မန်ဘာ ၅၀ ခန့်လာပြီး ဆုအတွက်ပါ အပါအ၀င် ကုန်ကျစားရိတ် ၄၃၁၀၀၀ ကျပ် ကုန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ ဒုတိယအကြိမ် ကွန်ဖရဲင့်စ် အတွက်
အကြိုက်ဆုံးစာပေဆုက ၅ ဆု
ကဗျာဆုက ပြခန်း ၁+၂+၃ ဆို ၃ ဆု ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း ၈ ဆုဖြစ်သွားပါမယ်။
ကွန်ဖရဲင့်စ်တက်မယ့် ရွာသူားလည်း တိုးလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(မျက်နှာမပြရဲတဲ့သူတွေလည်း ဒီတစ်ခါတော့ မျက်နှာသာမက ကိုယ်လုံးပါ ပြရဲလောက်ပါပြီ)
ဆုရပို့စ်တွေကို စာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့လည်း အိပ်မက်ထားပါတယ်။
ကျမတို့ ဖတ်ရွေးတွေ အရင်လိုပဲ ငွေစုနေကြပါပြီ။
ရွာသူားတွေထဲမှာလည်း ရွာကျိုးတွက် ငွေအားနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီချင်ကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ကျမ ငွေဖလားကြီး ခေါက်ချင်ပါတယ်။
ကူညီချင်တဲ့သူများ ကျမရဲ့ e-mail address= padonmar009@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
(တွေ့ဆုံပွဲတွက် မထည့်မနေရ ကောက်တာ မဟုတ်ပါနော်၊ ငွေမထည့်လည်း တွေ့ဆုံပွဲ ကိုယ်တိုင်လာတာ ပိုသဘောကျပါတယ်)
ဘဏ်မှ ငွေလွှဲလိုသူများတွက် ကျမနဲ့မမ Joint Account တစ်ခု ဘုရင့်နောင် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှာ ဖွင့်ပြီး
Account number ပေးပါမယ်။
Bank : ဘုရင့်နောင် ကမ္ဘောဇဘဏ်
နာမည်ဖော်စေချင်ရင် ဖော်ပြပြီး မဖော်စေချင်ရင်တော့ ရွာသားတစ်ဦးပေါ့။
ရန်ကုန်၊မန္တလေး မှ လူများတွက် ကို ကိုပေါက်နဲ့ ရွှေတိုက်စိုး၊လုလင်၊အမတ်မင်း တို့ လိုက် ကောက်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်တွက် ကုန်ကျစားရိတ် မလောက်ငရင် ကျမစိုက်ပါမယ်။
(ဦးပါ တာဝန်ယူတုံးကလည်း စိုက်ခဲ့ပါတယ်)
လောက်ငတာထက် ပိုခဲ့ရင် ကျမတို့ ဖတ်ရွေးတွေအတိုင်း အချိုးကျ ထည့်ဝင်ပြီး ပိုတာကို ဂဇက်မိသားစု ရန်ပုံငွေလုပ်ပါမယ်။
ရွာကျိုးတွက် လိုအပ်တာကို ရွာသူားများကိုအသိပေးပြီး သုံးပါမယ်။
ရွာရဲ့ အ၀င်တွေခက်ရင် ရွာထဲဝင်ဖို့ စိတ်ပျက်ပြီး လှည့်ပြန်ကြရတာကို အဆင်ပြေစေမယ့် အတတ်ပညာ၊
အပေါ်မှာရေးခဲ့သလို နောက်နောင်လတွေမှာ ဖတ်ရွေးတွေ ခေါင်းစားစရာမလိုပဲ မန်ဘာတွေကပဲ ဗုတ်လို့ရအောင် (ဗုတ်ရာမှာလည်း တရားမျှတမှု ရှိဖို့ ရသင့်တဲ့ ပို့စ်ရဖို့)ဆိုတာတွေ ကို လူငယ်ခြေတက်လေးတွေ စီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ယနေ့ပို့စ်ဟာ ဖတ်ရွေးတွက်ရော ဖတ်သူတိုင်းတွက်ပါ တော်တော့်ကို အသုံးဝင်လို့ မောင်အံ့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
အံဇာတုံ့းအတွက် အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ သူပဲ ဆက်လက်တာဝန်ယူ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မောင်အံများ အကူအညီ လိုမယ်ဆိုရင်
anzartone@gmail.com နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကူညီကြစေချင်ပါတယ်။
ကဗျာပြခန်းဟာ လူငယ်တွေရဲ့ အားကို ပြလိုက်တာပါပဲ။
အဲသလိုပဲ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲလေးလည်း ပြန်ဖြစ်အောင် ကူညီနိုင်သူတွေ ကူညီကြစေချင်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ဂဇက် ကွန်ဖရဲ့င့်စ် အပြီးတုံးက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက် ၆လကြာရင် ထပ်လုပ်မယ့် ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက် ကွန်ဖရဲ့င့်နဲ့ ဆုပေးပွဲကို ဘယ်လို ပျော်စရာ အစီအစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ကြမယ်ဆိုတာ အိပ်မက်မက်ကြပါစို့။
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက် ကွန်ဖရဲ့င့်စ်ကို ဂျူလိုင်လထဲမှာ ကျင်းပပါမယ်။
ဇွန်လအကြိုက်ဆုံးပို့စ်ကို ဂျူလိုင်၁၅ ရက်နေ့လောက်မှာ အပြီးရွေးပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်မှန်းပါတယ်။
အများအားလပ်မယ့် ပိတ်ရက်တွေက ၁၉(အာဇာနည်နေ့)/၂၁ တနင်္ဂနွေ/၂၂ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့/၂၈ တနင်္ဂနွေတွေ ရှိပါတယ်။
အဲတော့ အနီးဆုံး တနင်္ဂနွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျူလိုင် ၂၁ နေ့ မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ရာထားပါတယ်။
အဝေးမှ လာရမယ့်သူများကို ဦးစားပေး ရက်ရွေးပါမယ်။
အကယ်၍ ၂၁ ရက်အပြင် အခြားပိတ်ရက်မှာမှ လာနိုင်တဲ့သူတွေ စားသောက်ဆိုင်ကို ရက်မသတ်မှတ်မီ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ဇွန်လ 20 မတိုင်မီ အကြောင်းကြားပေးစေလိုပါတယ်။
ခြံကျယ်ကျယ်ရှိတဲ့ တစ်နေရာမှာ ရွာသူားတွေရဲ့ လက်ရာ ဘူဖေးစီစဉ်မယ် စဉ်းစားမိပေမယ့်
မိုးကာလဖြစ်နေတာကြောင့် မိုးလုံလေလုံဖြစ်မယ့် အရင်တစ်ခါက ကန်တော်ကြီး P3 Restaurant
မှာပဲ ကျင်းပမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
နံနက် ၉ နာရီ စပါမယ်။အရင်တစ်ခါက စကားပြောရတာ မ၀ဘူးဆိုသူများတွက် အချိန် ပိုယူပေးထားပါမယ်။
ဆယ်အိမ်ခေါင်း ရွှေတိုက်စိုးကို စိတ်ကြိုက် စီစဉ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
အရင်တစ်ခါနဲ့ မတူ ပိုလှပတဲ့ ဆုဖြစ်ဖို့ ဆယ်အိမ်ခေါင်းပဲ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဘာဆုလဲဆိုတာတော့ ကွန်ဖရဲ့င့်စ်မှာရင်ခုန်ဖို့ ရှင့်ဆေးလိပ်(တော့စီးဂရက် မဟုတ်) လျှို့ဝှက်ထားပါမယ်။
ပေးချင်တဲ့သူတွေ စိတ်ကြိုက် စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
မန်းဂဇက် ချစ်သူများဆုရ စာမူများ/ကဗျာများ စာအုပ်
ရွာသူ ပန်းလေးတစ်ပွင့်က သူစုံစမ်းပေးပါမယ်၊
၊ဒီ အမှတ်တရစာအုပ်လေး စီစဉ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြရအောင်လို့ တာဝန်ယူလာပါတယ်။
သူ့စိတ်ကူးလေးက အုပ် ၁၀၀ လောက်ရိုက်မယ်။
တွေ့ဆုံပွဲလာ စာအုပ် အမှတ်တရ လိုချင်သူတွေကို အရင်းထက် နည်းနည်းပိုတဲ့ နှုန်းနဲ့ ရောင်းမယ်။
မြတ်ရင် ဂဇက် ရန်ပုံငွေ လုပ်မယ်လို့ အကြံပေးလာပါတယ်။
လူငယ်လေးတွေ ကိုယ်ပိုင် အိုင်ဒီယာနဲ့ တာဝန်ယူပေးလာတာ ကျမတို့ လူကြီးတွေတွက် အားဆေးထက်သာပါတယ်။
စာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့ တာဝန်ယူစုံစမ်းပေးမယ့် ရွာသူလေး Green Rose ရဲ့ e-mail
livethelifealive@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပြီး ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တာလေးတွေ ကူညီပေးနိုင်ရင် ကူညီပေးကြစေလိုပါတယ်။
သူက ဒီ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး Field ထဲကလည်း မဟုတ်၊ အတွေ့အကြုံလည်း များများမရှိသေးသော်လည်း
ရွာ့အကျိုးတွက် ကုန်ကျစားရိတ် အနည်းဆုံးနဲ့ အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးချင်လို့ သူကိုယ်တိုင် ဆန္ဒြ့ပုလုပ်အားပေးလာတာပါ။
ကျမစကားနဲ့ ပြောရရင် အဟံပထမံ လုပ်လာတဲ့ ကလေးမို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီခြင်းဖြင့် အားပေးကြစေလိုပါတယ်။
လစဉ်ရွေးလာတဲ့ အကြိုက်ဆုံးဆုရ စာမူနဲ့ အတူ အကောင်းဆုံးမှတ်ချက် (Best Comment) လေးတွေကိုလည်း
အဆင်ပြေရင် ထည့်ပြီး ပုံနှိပ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အတွက် BC မရွေးရသေးတဲ့ ဆုရ ပို့စ်ပိုင်ရှင်များ ရွေးပေးဖို့ ပန်ကြားချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပို့စ်မှာ မန့်တဲ့သူတွေထဲက ကိုယ်ဆိုလိုတာနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်တဲ့ ကွန်မန့်၊ကိုယ့်ကို လမ်းတည့်ပေးနိုင်တဲ့
ကွန်မန့်လေးတွေကို BC ရွေးပေးခွင့် ပို့စ်ရေးသူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။
BC များများရရင် ကြယ်လေးတွေ တက်လာပါတယ်တဲ့။
ကိုယ် BC ရွေးပေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်စာကို တလေးတစား အားပေးမန့်တဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ ကြယ်လေးတွေ တိုးတက်အောင် ကူညီရာရောက်ပါတယ်။
(အဲဒီကြယ်က ပွိုင့်နှင့်တော့ မဆိုင်ပါဘူး။တနည်းပြောရရင် သူတပါးအဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ အဖိုးတန်အချိန်နဲ့ ဦးနှောက် ကူညီပေးတဲ့အတွက် ရတဲ့ ကြယ်လေးတွေပါ)
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက် ကွန်ဖရဲ့င့်နဲ့ ဆုပေးပွဲကို ဘယ်လို ပျော်စရာ အစီအစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ကြမယ်ဆိုတာ အိပ်မက်မက်ကြပါစို့။
ပွဲနံပါတ်၂ ဆိုတော့ ၁ထက်တော့အစီအစဉ်ပိုကောင်းလာပါပြီ
ဟလို တက်စတင် ၀မ်း တူး သရီး
အော်….တကယ်ပါ…မန်းလေးဂေဇက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလောက်အများကြီးမသိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။ ရိုးရိုးနင်းဆိုဒ်တွေလိုပဲ ဝင်ချင်သလိုဝင်ပြီး ရေးချင်သလိုရေးနေမိရုံသက်သက်ပါ။ ဒီနေ့ တော့ အများကြီးသိလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအပတ် ၁နွေကို မန်းလေဂေဇက် အတွက် အချိန်သီးသန့် ပေးပြီး လေ့လာ မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ဒီပို့ စ်နဲ့ တင် အတော်လေး စုံစုံလင်သိလိုက်ရတယ်။ ကျနော်တက်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ချက်ချင်း မက်ဆေ့ရိုက်ပြီး ဝိုင်းပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ် ပေးထားတဲ့ အကောင့်နှစ်ခုကို လဲ အက်ထားပါ့မယ်။
ဒီပို့ စ်အတွက် အန်တီလား မမလားမသိ တဲ့ အမ ပဒုမ္မာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့.. ကွန်ဖရဲ့င့်.. .ရွှေပွဲလာတွေကို မဲဖောက်ပေးဖို့.. (ထုံးစံအတိုင်း) .. မီမိုရီလေးတွေစ၀ယ်နေပါတယ်..
Sony 16GB High Speed Class 10 SDHC လေး၂ခုဝယ်ပြီးပါပြီ..
ဒီနေ့မှာပဲ.. ကွန်ဖရင့်အတွက်.. မဲဖောက်ပေးရမယ့်လက်ဆောင်ကို.. (ထုံးစံအတိုင်း).. ဒွေးလေးပဒုမ္မာရဲ့ အကူအညီနဲ့. အခမဲ့(မေတ္တာနဲ့) သယ်ပေးသူထံပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း…
လူကြုံထပ်ရှိရင်.. မင်္ဂလာဆောင်တွေအတွက်.. မင်္ဂလာလက်ဆောင်တွေပို့ပေးဦးမယ်ဖြစ်တာမို့.. မင်္ဂလာဆောင်ထားသူ/ဆောင်မယ့်သူများ.. ရွှေပွဲတက်ကြစေလိုကြောင်း….
၀င့်ပြုံးမြင့်က သူ့ စာမူခ ၁၅ ဒေါ်လှကို အလှူခံဖလားကြီးထဲ ထည့်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ :harr:
ဆရာမပြုံးကိုပြောချင်တာက.. ကျုပ်က.. အဲဒီနေ့မှာ ဆရာမကို စာမူခပေးတာပါလို့..
ကဗျာပြခန်း(၁)ထဲကနေ.. (ကတိအတိုင်း) ကဗျာတပုဒ်ရွေးပြီးပုံနှိပ်ထားတာလည်း.. စာမူခပေးဖို့ရှိပါတယ်…
မပဒုမ္မာ ၊ တော်တော်ကို ပြည့်စုံအောင် ရှင်းပြထားတာပဲ ။
တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ၊ ထပ်အားဖြည့်ပေးပါရစေ ။
ကျနော်တို့က ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ မျှမျှတတ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ၊ စဉ်းစားစရာ ၂ ချက်တွေ့ရပါတယ် ။
၁ ။ တစ်လအတွင်းမှာတင်တဲ့ Post အားလုံး ( ၂၀၀ လောက်ရှိမယ် ) ထဲက ၊
ရွာသူား အားလုံးက တစ်ချီထဲ ဝိုင်း မဲပေး Vote ကြမလား ။
၂ ။ အဖွဲ့တစ်ခုက အရင် ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ လောက် ရွေးပေးပြီး ၊
အဲဒီ ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ ကိုမှ ရွာသူား အားလုံးက ဝိုင်း မဲပေး Vote ကြမလား ။
အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိကြပါတယ် ။
နံပါတ် ( ၁ ) အတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ၊
၁-၁ ။ ပိုပြီး ဒီမိုဆန်ပါတယ် ။
၁-၂ ။ မဲပေး Vote လုပ်တာ တစ်ချိန်ပဲ ရှိတဲ့အတွက် အလုပ် သက်သာ အချိန်သက်သာပါတယ် ။
၁-၃ ။ ဒါပေမယ့် ၊ Post ၂၀၀ ကျော် Vote ဖို့ တင်ရတဲ့အတွက် ၊
Technically မဖြစ်နိုင်ဘူး / ဖြစ်နိုင်ရင်တောင် ရေရှည် မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
၁-၄ ။ Post ၂၀၀ ကျော်ကို ဝိုင်းရွေးတဲ့အတွက် မဲတွေပြန့်သွားပြီး ၊
အမှတ်တူနေတဲ့ ပြဿနာ / ဘယ်သူမှ မဲသိပ်မရတဲ့ ပြဿနာ နဲနဲ များနိုင်ပါတယ် ။
နံပါတ် ( ၂ ) အတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ၊
၂-၁ ။ အရင် ဇကာတင်ရွေးရ ၊ ပြီးမှ ၊ မဲပေး Vote လုပ်ရတဲ့အတွက် ၊
အလုပ် ပိုများ အချိန် ပိုကုန်ပါမယ် ။
၂-၂ ။ အဖွဲ့တစ်ခုက အရင်ရွေးထားတာဆိုတော့ ဘက်လိုက်တယ် အပြောခံရနိုင်ပါတယ် ။
၂-၃ ။ ဒါပေမယ့် ၊ ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ / ၃၀ ကိုပဲ Vote လုပ်ဖို့ စီစဉ်ရတဲ့အတွက် ၊
Technically ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးမယ့်သူတွေအတွက် နဲနဲ ပိုအဆင်ပြေပါမယ် ။
၂-၄ ။ အဲဒီ ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ / ၃၀ ကို ရွာသူား တွေ ပြန်ဖတ်မိနိုင်ပါတယ် ။
ကျနော့်ရဲ့ သဘောထားကို ပြောရရင်တော့ ၊
အစီအစဉ် ( ၁ ) က ပိုပြီး ဒီမိုဆန်ပေမယ့် ၊ Post ၂၀၀ ကျော် Vote ဖို့ တင်ရရင်
Technically ရေရှည် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
Vote တွေလဲ ပြဲသွား ၊ ပြန့်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အစီအစဉ် ( ၂ ) က တော့ နဲနဲ ပိုအဆင့်များပေမယ့် ၊ Vote တွေ ပိုကျစ်လစ်သွားမယ် ၊
ရွာသူား တွေလဲ အဲဒီ ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ / ၃၀ ကို ပြန်ဖတ်မိတဲ့ အကျိုးရနိုင်တဲ့အတွက် ၊
အဘ ကတော့ ၊ အစီအစဉ် ( ၂ ) က ရေရှည် ( ရေရှည် ) ပိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တာပဲ ။
အဲဒီ အစီအစဉ် ( ၂ ) ကိုမှ ၊ ဒီမိုဆန်ချင်ရင်တော့ ၊
၁ ။ ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ / ၃၀ ကို ရွေးပေးမယ့် အဖွဲ့ထဲကို ၊
ပါဝင်လိုတဲ့ ရွာသူား အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် ။
( အရင် ဖတ်ရွေးတုန်းကလဲ ဖိတ်ခေါ်ဘူးပါတယ် ၊ ရေရှည် ဘယ်သူမှ မလာကြပါဘူး )
၂ ။ ဒါမှမဟုတ် ၊ ရွာသူသားတွေက သူတို့ အကြိုက်တွေ့တဲ့ Post ကို ၊
Vote လုပ်မယ့် ဇကာတင် အပုဒ် ၂၀ / ၃၀ ထဲထည့်သင့်တယ် ဆိုပြီး အကြံပြုရင်လည်း ၊
ဇကာတင် ရွေးပေးမယ့် အဖွဲ့က ၊ Vote လုပ်မယ့် ဇကာတင် ထဲ ထည့်ပေးရန် ။
ဒါတွေကတော့ ၊ အဘ ခုလောလောဆယ် တွေးမိတာလေးတွေပါ ။
ရွာသူသားတွေ အားလုံး ပါဝင်ပြီး ဝိုင်း ဝေဖန် ၊ အကြံပြု ၊ ဆွေးနွေး ၊ ဆန္ဒပြုစေလိုပါတယ် ။
အဘ အနေနှင့်ကတော့ ၊ နောက် လူငယ်တွေကို လွှဲပေးချင်တာပါပဲလေ ။
အဘ တို့က အသက်ကြီး ၊ မျက်စိ မွဲလာတော့ ၊ သိပ်မစွမ်းသာတော့ဘူးလေ ။
( ဒါနှင့် စကားမစပ် ၊ ကို အံဇာ ရဲ့ ယနေ့ Post လဲ မတွေ့တော့ပါလား )
စကာတင်ရွေးတဲ့စနစ်ကို ကျနော် လည်း ထောက်ခံရဲ့…
စကာတင်စနစ်မှာ …(ဖတ်ရွေးက အပုဒ်-၂၀ ရွေးထားတယ်)ဆိုပါစို့…
စာဖတ်သူက သူ တကယ်နှစ်သက်တာ ဒီ ၂၀ ထဲကမဟုတ်ဘူး
တခြားတပုဒ် ဆိုပြီး ပေါင်းထည့်မယ်ဆို ပေါင်းထည့်လို့ရမယ့်
setting တခုရှိပါတယ်ဗျ…။ ဆိုတော့ အဲ့သည့် စနစ်က ပိုမို အလုပ်ဖြစ်မယ့်သဘောပါဗျို..
အဘ သမီးကတော့ နံပါတ် (၂) ရဲ့ နံပါတ် (၂) နည်းကို ပိုကြိုက်တယ်။ သမီးလည်း ပိုစ့်အားလုံး မဖတ်နိုင်ဘူး။ ကောင်းမယ်ထင်လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ ပိုစ့်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရင် အဲဒီပိုစ့်ရဲ့ ကွန်မန့်မှာ ဒီပိုစ့်ကိုတော့ ဇကာတင်စာရင်းအတွက် Vote လုပ်ပါတယ်လို့ပြောမယ်။ အဲဒီလို Vote လုပ်တဲ့ပိုစ့်တွေထဲကရယ်၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ၀င်မဖတ်ဖြစ်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Vote မလုပ်ထားတဲ့ ပိုစ့်တွေထဲကရယ် ၂မျိုးပေါင်းထဲက ပဏာမဇကာတင်ကို ဖတ်ရွေးက ရွေး။ အဲဒီထဲကမှ နောက်ထပ် ဇကာတင်စာရင်းကို member တွေက vote လုပ်ပြီးရွေး။ နောက်ဆုံး ကျန်တဲ့ဇကာတင်ထဲကမှ ပထမဆုအတွက် Vote ထပ်လုပ်တာမျိုးကို ပိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ သမီးနှစ်သက်တဲ့နည်းကိုပဲ ပြောတာဖြစ်လို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမပြေတော့ မပြောတတ်ဘူး။
စုံထောက်ကြီး အောင်တိုက်ရဲ့ အီးမေး ကျန်ခဲ့လို့ ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်ပဒုမ္မာက စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်ရွေးကိစ္စ
ကိုရင်ဖေါက ဖြည့်စွက်ထားပေးတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ..
“၂ ။ ဒါမှမဟုတ် ၊ ရွာသူသားတွေက သူတို့ အကြိုက်တွေ့တဲ့ Post ကို ၊
ဇကာတင် ရွေးပေးမယ့် အဖွဲ့က ၊ Vote လုပ်မယ့် ဇကာတင် ထဲ ထည့်ပေးရန် ။”
ဆိုတဲ့အချက်က ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးအတွက် အင်မတန် သင့်လျှော်လို့
တဆက်ထဲ ..ဇကာတင်ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကို စိတ်ပါလက်ပါ ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီကြဖို့လည်း
ပို့စ်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ဒေါ်ပဒုမ္မာရဲ့မေးကို ဆက်သွယ်ကြပါလို့….
မသိတာလေး မေးချင်လို့ပါဗျာ ၊
အဲဒီပွဲကို လူပိုခေါ်လာလို့ ရပါသလားခင်ဗျာ ၊
သား က လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ပါ ၊
ဒီကောင် ဘာအကြံအစည်ရှိမှန်းတော့ မသိပါဘူး ၊
မဲပေးမယ့်ဟာကတော့ နံပါတ် ၂ ကို ပိုကြိုက်ပါတယ် ၊
” အဲဒီပွဲကို လူပိုခေါ်လာလို့ ရပါသလားခင်ဗျာ ၊
သား က လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ ”
ရပါတယ် ကို Myo Thant ရေ ။
ကလေးလေး တစ်ယောက်အတွက် ၊
ကျနော်တို့ ထူးပြီး အပန်းမကြီးပါဘူး ။
တစ်ခါဆုရထားပြီးသူက ထပ်ရေးလို့ကောင်းနေရင် ဆုပေးဦးမှာလားဗျ
အဲ့ဒေါ့လဲ မစားရတဲ့ စပျစ်သီး ချဉ်ပစ်ယုံပေါ့ကွာ… ဒီဆုလောက်များ…. ဟွန့်
နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက် များညီ နေလိုက်တာများ။
ကျုပ် က စပယ်ရှယ် ဆုချမယ်။
မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့ လဲ ပို့ ပေးမယ်။
ဦးကြောင် တို့ ၊ ကိုပု တို့လို ၊
Satire ရေးနေကြ ရွာလူကြီးတွေအတွက် ၊
အထူးဆု ဆိုပြီး သပ်သပ် စီစဉ်ကြရင် ၊ မကောင်းဘူးလား ။
တကယ်ကို ဘက်စုံထောင့်စုံနဲ့ စနစ်တကျစီကာရီကာ ရေးထားတဲ့အတွက် စာရေးသူကို လေးစားမိတယ်ဗျာ။
ဂဇက်တွေ့ဆုံပွဲကို ကျွန်တော်တို့လို မန်ဘာသက်တမ်း သိပ်မကြာသေးတဲ့သူတွေရော တက်လို့ရလားဗျ။
” ကျွန်တော်တို့လို မန်ဘာသက်တမ်း
သိပ်မကြာသေးတဲ့သူတွေရော တက်လို့ရလားဗျ ”
ရပါတယ် ကို ငြိမ်းမောင် ရေ ။
ဆုပေးပွဲ တက်ဖို့ စာရင်းပေးဖို့ လိုတယ် ဆိုရင်တော့
ထိုင်ခုံတခုံစာ ဒေါ်ဆူး တယောက် လို့ မှတ်ပေးပါနော်.. အပျိုကြီး ဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး အပူအပင်ကင်းကင်း တယောက်တည်း လာခဲ့မယ်.. အဟိ
ဘယ်တုန်းက အပျိုကြီး ပြန် ဖြစ် သွား တာ တုန်း
တွေ့ ဆုံပွဲ လုပ်မယ့် ရက် ဟာ
၂၂ ရက် ( ဝါဆို လပြည့်နေ့)
ကို ပို ဖြစ်စေချင် ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ မှ အလုပ် ပိတ်မှာ မို့ ပါ။
၂၁ ရက် နေ့က တနင်္ဂနွေ ဆိုပေမယ့်
ကျွန်တော်တို့ လို sunday မပိတ်တဲ့ အလုပ်များမှာ လုပ်နေသူ တွေက ပိတ် ရက် ၂၂ နဲ့ တွဲပြီး sunday ၂၁ ရက် နေ့ နားလို့ မရ ပါဘူး။
အဲဒီ လို ၂၁ မှာ သာ လုပ် ရင်
အလက်းဆင်း လေးတော့ လာချင် လျက်နဲ့ မလာ နိုင် ဖို့ များပါ ကြောင်း
အများပြည်သူ တကယ် အားလပ်မှာ သေချာတဲ့ 
ဝါဆို လပြည့် နေ့ မှာ
တွေ့ ဆုံ ပွဲ လုပ် ဖြစ်ဖို့ 
အဘ ဖော ရဲ့ အဆိုပြု ချက်ကို
ကူညီ နိုင် တာ ကို
နိုင် သ လောက် ကူညီ ဖို့ 
ပြင် ဆင် ထားပါ ကြောင်းးး
Man, Money အတွက် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွားပါတယ် အန်တီ ရှင့် …
“အစီအစဉ် ( ၂ ) ကိုမှ ၊ ဒီမိုဆန်ချင်ရင်တော့ ၊
ဇကာတင် ရွေးပေးမယ့် အဖွဲ့က ၊ Vote လုပ်မယ့် ဇကာတင် ထဲ ထည့်ပေးရန် ။´´
အဘဖော အဆိုပြုတဲ့ထဲက အမှတ်စဉ်(၂) အချက်က သင့်လျှော်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဒုတိယ ပုံစံက ပိုလို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
နည်းပညာဘက်မှာ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ကူပါမယ် လို့
စကားမစပ် ပီဒီအက်ဖ်ရော ထုတ်ချင်သလားဟင်
ထုတ်ချင်ရင်တော့ သိကြားမင်း လက်စွမ်းပြပေးပါမယ်ခည
ကျွန်တော် ပလယ်ဆန်တာ အခု အင်္ကျီဝယ်ဖို ပိုက်ဆံစုနေပါပြီး……..
ဇီးရိုးကွာတာလေး ၀တ်ရင်ကောင်းမလားလို………….. အဟိ….
ကဲကဲ ဖလားသုံးလုံး ရှိတယ်နော်………… ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.. ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်… လာထား အာာာာာာဘွား……….
ကောင်းပါလေ့။ ကောင်းပါလေ့။ ကောင်းပါလေ့။
အစ်မပဒုံမ္မာ လေး ရေရရရရရရရရရရရရရရရရ။ (အငြိမ့်ပွဲ ထဲက အသံအတိုင်း ဖတ်ကြပါရန်)
ဒီလိုပွဲ ကို ဘယ်တော့မှများ နွှဲ နိုင်ပါ့မယ်မသိ။
ဝုတ် ပုံစံ တော့ အဘဖော ဆွေးနွေးသွားတဲ့ (၂) ကို ထောက်ခံပါတယ်။
ကျန်တာ ကိုလဲ မကန့်ကွက်ပါဘူး။
ငယ်ငယ်က အငြိမ့်တွေ ဇာတ်ပွဲတွေကြည့်ဖူးပါတယ်။
ဒီမင်းသမီးကြီး ဖလား ၃ လုံးခေါက်တာ နည်းနည်းလွန်သလိုပဲ။
အစ်မရေ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကူညီပါမယ်။
လောလောဆယ်တော့ ဘာတတ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့-
Man- တွေ့ဆုံပွဲတက်ပါမယ်။ ကျွမ်းကျင်တာဝိုင်းကူတဲ့အနေနဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်းကိုင်မယ့် မိုက်ကို
ဓါတ်ကြိုးနဲ့ ဆက်ပေးပါမယ်။ (၄၄၀ ဗို့)
Money- တတ်နိုင်သလောက်ထည့်ပါမယ်။ (၁၀ တန်အထပ်လိုက်စုထားတယ်)
Material- အကျွမ်းကျင်ဆုံးပညာရပ်ဖြစ်တဲ့ သူများလုပ်တာလိုက်ပြီး ထောက်ခံပေးပါမယ်။
အန်တီပဒုမ္မာခင်ည… အစီအစဉ်တွေ အားလုံးကို ကြိုက်ပါတယ်..
လက်ခုပ်တီးဖို့တောင် မလာနိုင်လို့ ၀မ်းနည်းရပါတယ်…
အခု ဗော့စ်စနစ်နဲ့ ရွေးချယ်တာကို ထောက်ခံပါတယ်။
ကိုရင်တို့ ကာလသားတွေအထူး အထူးစပါယ်ရှယ်…
ဘာအစီအစဉ်တွေများ ရှိမလဲ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်..
တချို့ကာသားတွေကျတော့ ရွာငှက်မလေးတွေကို လောင်ချာနဲ့ထုတောင်
ကျနော်ကော စက်သေနတ်နဲ့ ဝင်ပစ်လို့ ရလားဟင်
စီကာ စဉ်ကာ ပါလား အာတီဒုံ။
သရီး အမ်(မ) မှာ ဝမ်း အမ်(မ) ပဲ ကူနိုင်တာကြောင့် လက်ခံမဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဆက်သွယ်ပြီးကြောင်းပါ။
ဆုပေးပွဲရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် အပျော်တွေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။
ရွာလူကြီးတွေ မေးခွန်းတွေ ၀ိုင်းဖြေပေးကြအုံးနော်၊
စာအုပ်စီစဉ်နေတဲ့ နှင်းဆီစိမ်းလေးရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ
ပို့စ်ထဲ ဖြည့်ထားတဲ့ စာတွေပါ။
(လစဉ်ရွေးလာတဲ့ အကြိုက်ဆုံးဆုရ စာမူနဲ့ အတူ အကောင်းဆုံးမှတ်ချက် (Best Comment) လေးတွေကိုလည်း အဆင်ပြေရင် ထည့်ပြီး ပုံနှိပ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အတွက် BC မရွေးရသေးတဲ့ ဆုရ ပို့စ်ပိုင်ရှင်များ ရွေးပေးဖို့ ပန်ကြားချင်ပါတယ်။)
စာအုပ်မှာ ပန်းချီ၊ဒီဇိုင်း၊ဓာတ်ပုံလေးတွေ ထည့်နိုင်ဖို့ ရွာထဲက ပန်းချီနားလည်တဲ့သူ၊ဓာတ်ပုံနားလည်တဲ့သူတွေ ကူကြပါအုံး။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ကနေ သတင်းကြားပြီး ချောင်ကြိုချောင်ကြားရောက်နေတာနဲ့ အတော်ကလေးတောင် နောက်ကျနေပြီ။
ပထမအကြိမ်ထက် ဒုတိယအကြိမ် ပိုမိုစည်ကားပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ….
ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှ သိမှာမို့ အချိန်မနှောင်းခင် အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းကြပါလို့။
ရှေးဟောင်းလူသားးး အဲ- ရှေးရှေးကတည်းက ရွာသူားဖြစ်ပြီးသူများအပြင်…
ရွာသူားဖြစ်တာ မကြာသေးသူများလည်း ဒီရွာကိုရောက် ဒီရေသောက်ပြီဆိုမှဖြင့် တသွေးတည်း တသားတည်း ညီညွတ်ရေးကို ပြသသောအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက်ပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ပါကြောင်းးးး :hee:
ဆင် မျောက် ခါ လို ၀ါစဉ် စဉ်ချင်ရင်လည်း တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြုလုပ်နိုင်ကြပါကြောင်းးးးးးးးး
လူကြီးတွေက အားတက်သရောနဲ့ အပင်ပန်းခံ စီစဉ်ပေးနေတာကို တကယ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်… (သမီးထက် အသက်ကြီးရင် လူကြီးပဲ… တိုက်တိုက်တို့ရော..အံစရာတို့ရော..အကုန်ပါတယ်.. အဟိ)
သမီးတို့ဘက်ကလည်း ဖလား သုံးခု.အဲ..သမီးက နောက်ဆုံးဖလားတော့ လုံးဝမသိဝူး..ဆိုတော့..ဖလား နှစ်ခုမှာ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးပါမယ်လို့…
နောက်ပြီး vote ကိုလည်း ဖတ်ရွေးက ဇကာတင်ရွေးပေးတာကို ပြန် vote ရတာကို ကြိုက်ပါတယ်… ဖတ်ရွေးက တက်လာမယ့် အပုဒ် (၃၀) ဆိုရင် အားလုံးရဲ့ အကြိုက်နဲ့လည်း မလွတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်…
မန်ဘာတွေပဲ ဗုတ်ချင်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဇကာတင်ပို့စ်ကို မန်ဘာအုန်းတီး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်…
ကျုပ်က ဂျူလိုင် ၂၁ ဆိုရင် ရွာပြန်ပီဂျ……
ဒါများ ခက် ခက် လွန်းလို့။
ရွက်ဆုတ်ပြက္ခဒိန်ကို ၂ရက်လောက် ရွက်မဆုတ်ပဲ ထားလိုက်ပေ့ါ။
ဘယ်နေ့ နောက်ဆုံးပေးပို့ နိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ
အကောင့်က ဒီနေ့မှ သွားဖွင့်ရမှာပါ။
နောက်ဆုံးရက်ကတော့ အခမ်းအနားလုပ်မယ့်ရက် အတိအကျ သတ်မှတ်ပြီးရင် အဲဒီရက်မတိုင်မီ ၁ရက် ၂ရက် အလိုဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ :hee:
မန်းလေး အနီးတစ်ဝိုက်ငွေကောက်ခံပေးတဲ့အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါကြောင်း
ဒီတစ်ခါတော့ အားခဲထားတဲ့ ဂဇက် ကွန်ဖရဲင့်စ် တက်နိုင်ပြီပေါ့။
စွယ်တော်ရွက် ပါရင် ကျမတို့ အငြိမ့်ကို ဆလိုက်ထိုးပေးမယ့်သူ ရပြီ။
စာအုပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ကို ပြုံးမကူညီနိုင်ပဲ ဖြစ်သွားတာ ရန်ကုန်မှာ မဟုတ်ဘဲ မအူပင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဖလားကြီး သုံးလုံးထဲလည်း ပြုံးဘာမှ မထည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူကြီးကိုပဲ ပြောရဦးမယ်။ ဟိုတစ်ခါ သူကြီး ပြောထားတာရှိတယ်။ မျှစ်ကြော်ပြုံးရဲ့ စာမူကို ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ထည့်မယ်တဲ့။ အဲဒီအတွက် ၁၅ဒေါ်လာ ပေးမယ်တဲ့။ သူကြီးကမေ့ မမေ့တော့ မသိဘူး။ ဒါမျိုးဆို မျှစ်ကြော်ပြုံးတို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့။ အဲဒီ ၁၅ဒေါ်လာကို ဒုတိယဖလားကြီးထဲ ကြိုတင်ထည့်ပါတယ်နော်၊ အဟိ။
ပထမဖလားကြီးထဲကိုတော့ ဆောတီးပဲလို့ ပြောရမယ်။ မျှစ်ကြော်ပြုံး ဆင်နှစ်ကောင်မွေးထားလို့ ပင်ပန်းတာ စားပြီးသားထမင်းတောင် ပြန်အန်ထွက်တဲ့အထိ။ အဲဒါကြောင့် ခရီးထွက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
ပြီးတော့လေ အချိန်တွေကုန်တာ သိပ်မြန်သလိုပဲ။ ၆လတစ်ခါ တွေ့ဆုံပွဲမလုပ်ဘဲ တစ်နှစ်တစ်ခါဆိုရင် ပိုကောင်းမလားလို့ပါ။ ပြီးတော့ တစ်နှစ်အတွင်း တစ်ယောက်ထဲကို နှစ်ကြိမ် ဆုမပေးတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
စာမူခကို ဖလားကြီးထဲထည့်မယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြုံးလို ပရိုတစ်ယောက်က ရွာထဲမှာ ပို့စ်တွေတင်ပေးတာ၊အခြားသူတွေရဲ့ ပို့စ်တွေမှာပါ စိတ်ဝင်တစားကွန်မန့်ပေးတာ ၊၊ပုံမနှိပ်ရသေးတဲ့ စာမူတွေ တင်ပေးတာ ရွာပေါ်သံယောဇဉ် ရှိတာ ပြပေးတာဖြစ်လို့ ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကြုံကြိုက်လို့ သားသားမီးမီးတို့နဲ့ အတူ ကွန်ဖရဲင့်စ် တက်ဖြစ်ရင်တော့ တစ်ရွာလုံးက ၀မ်းပန်းတသာကြိုနေကြမှာပါ။
တစ်နှစ် တကြိမ် လုပ်ဖို့ ကို
ချစ်စရာ ကောင်းသော ရွာသူားများနဲ့ 
ပျော်စရာ ကောင်း သော တွေ့ ဆုံမှု ကို
သိပ် အကြာကြီး ခွဲပြီး မလုပ် စေချင် လို့ ပါ။
အခု အတိုင်း ခြောက်လ တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်တာ သင့်တော် တယ် ထင်ပါတယ်။
အရင် တစ်ခါ ပွဲပြီးတော့ ပျော်ကြလွန်းလို့ ၆လ ပဲနေပြီး ထပ်ကျင်းပဖို့ ပြောကြပါတယ်။
အမှန်တော့ ဒီအချိန်က မိုးတွင်းဆိုတော့ သွားရေးလာရေးခက်ပါတယ်။
နောင်များ ဆက်လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ ဇန်န၀ါရီလ အကောင်းဆုံးလို့မြင်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ကွန်ဖရဲင့်စ်ကျမှ အသံနဲ့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာပေါ့။
၃.ဖလားကတော့ အရပ်ရှည်သလောက် ခေါင်းပုပါသဖြင့် စိတ်သာရှိပြီးမစွမ်းနိုင်ပါရှင်
ဟီး..တီနို… လာခဲ့ဘာနော်.. ဟိုခါလိုလေ.. ဟိဟိ..
ရွာရဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင် အချောအလှ မနိုဗွီနဲ့ ကံစမ်းမဲ မပါရင် ပွဲမစည်မှာမို့လို့ မနိုဗွီနဲ့ ဂျူနိုလေးကိုတော့ မဖြစ်မနေ လာစေချင်ပါတယ်။တစ်ရက်လောက်တော့ စိုက်ပျိုးရေးခြံကို ပစ်ပေးပါလားဟင်။
ခဏ ခဏ တွေ့တော့ ရိုးများသွားလေမလားရယ်လို့တော့ တွေးမိလေရဲ့။
အခြားမိတ်ဆုံပွဲတွေလည်း နှစ်ပတ်လည်အဖြစ် အများအားဖြင့် လုပ်ကြပါတယ်။
ရွာထဲမ၀င်တာလည်းကြာပီ … အဆက်လည်းပြတ်နေတယ် … စာတွေဖတ်ရမှာလည်း ဦးနှောက်က မလိုက်နိုင်ဖြစ် ဒါပေမယ့် အခု ဒီပို့စ်လေးကို ပထမဆုံးဖွင့်ဖွင့်ချင်းတွေ့လိုက်ရတော့ ၀င်ဖတ်မိတယ် … ကိုယ်လိုရာပဲ ဆွဲဖတ်သွားတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် … ပင်လယ်ပျော်လည်း ပြန်လာတော့မှာဆိုဒေါ့ ဒီတစ်ခေါက် တွေ့ဆုံပွဲလေးကို လာနိုင်အောင်ကြိုးစားချင်ပါတယ် … အဲဒီနေ့မှာ မိုးမရွာပါစေနဲ့လို့တော့ ဆုတောင်းပါတယ် …….
ရွာထဲ မတွေ့ရတာ ၅လ ၆လဖြစ်ပြီနော်။ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ။
အူးလေးပင်လယ်ပျော့ ရော သမီးလေး ၂ယောက်ပါ ခေါ်ပြီး မိသားစုလိုက်လာပါနော်.
ဗိုလ်တိုက်ပုတို့ မိသားစုနဲ့ ခုံလုရမယ်လေ။
မိုးရွာရင်လည်း အမိုးအကာအောက်မို့ စိတ်မပူပဲ လာစေချင်ပါတယ်။
မမ ပဒုမ္မာရေ …….. သမီးငယ်လေးတော့ မခေါ်လာတော့ပါဘူး အရမ်းငယ်သေးလို့ (၃) လပဲရှိဦးမှာ ၇ လပိုင်းဆိုရင်…. အကြီးမလေးကိုတော့ ခေါ်လာခဲ့မယ် ….. မိုးမရွာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိတယ် …. ဒါမှ ပန်းခြံထဲ အကြီးမလေးဆော့လို့ရမှာ ….. ဆုံမယ်နော် ……
စားဖို့ဆော့ဖို့ကျ ထိပ်က.. မပျောလိုက်ချင်ဝူး…
ကိုရင်ပျော့ ကို မမနှဲ ကိုင်-ထလိုက်ရမားးးး
မမနှဲ ဘာကြိုက်သဒုံး ညီဘွားငဲ့ …
Account ထဲသို့ ယနေ့ (၁၇.၆.၁၃)မှာ ကျွန်တော် ပံပိုးကူညီမည့်ငွေအား ထဲ့ပေးပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း
ကိုခင်ခထဲမှ လွှဲပို့ငွေ ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်းကျပ်တိတိ) ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးး